China Brass Ball Manufacturer na ngwaahịa | Lixin
Cylindrical ala agba
Agịga ala agba
Ngwaahịa Ahịa ndị ọzọ
Inye Ball agba
Anyị nwere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ n'ịmị ọla kọpa na ọla bọọlụ.
Bọọlụ ọla na-enye nguzogide magburu onwe ya na mmiri site na mmiri, ha dịkwa obere ala karịa ụgwọ bọọlụ ndị ọzọ na-eguzogide corrosion. A na-ejikarị bọọlụ ọla mee ọtụtụ ụdị ngwa valvụ chọrọ bọọlụ pere mpe.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ bọọlụ ọla kọpa dị ọcha na-ejikarị arụ ọrụ galvanic na mpaghara ụlọ ọrụ kọmputa. Bọọlụ ọla kọpa dị nro ya mere ọ dị mfe iji gbapuo, mgbe ahụ a na-ejikarị ya na valvụ, ihe nkedo mmanụ, ihe nkedo, nrụgide nrụgide, mita mmiri, usoro nnyefe, ọla, mgbaaka, ọla ntị, olu, aka-ebe na nka.
Nsogbu nke corrosion
Bọọlụ Brass Ezigbo nguzogide corrosion na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, mmiri brackish, mmiri-mmiri (belụsọ na oke mmụba), nnu nnu, ngwaahịa mmanụ, mmanya. Mara mma iguzogide sọpụrụ asịd na alkali. Ọ naghị eguzogide na kọntaktị na hydroxides, cyanides, oxidizing acids. Dịka iwu n'ozuzu, nguzogide corrosion na-ebelata ka ọdịnaya zinc na-abawanye.
Bọọlụ ọla kọpa Ezigbo nguzogide corrosion na mmiri na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, uzuoku, alkali, saline salọ na-anọpụ iche. Ha anaghị eguzogide na kọntaktị na oxidizing acids, halogens, sulphides, amonia, mmiri mmiri.
Agingzọ nkwakọ ngwaahịa nke Brass Ball na Ball Copper
1. Jiri akwa abụọ nke akpa akara na obere katọn, nke kwesịrị ekwesị maka izipu ihe atụ. Ibu ibu erughị 10kg.
2. Ejiri n'ime katọn nwere obere katọn anọ na akpa akara, na-atụle n'etiti 10kg na 25kg.
3. Ejiri n'ime akpa ndị a kpara akpa, nke nwere akwa abụọ nke akpa a kpara akpa na akwa abụọ nke akpa akara, na-atụle n'agbata kilogram 25 na 40 n'arọ.
4. Jiri plastic shei, tinye 1 obi ụtọ na onye ọ bụla kaadị oghere, nkukota izere. Okwesiri maka bọọlụ di elu na bọọlụ buru ibu.
5. Anyị nwere ike ibute bọọlụ dịka arịrịọ gị.
Anyị nwere ndị ọrụ na-arụ ọrụ ntanetị oge 24, ọ bụrụ na ịchọrọ bọọlụ ahụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị ọrụ ọrụ anyị.
Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa ma nwee ike ibuga ya na ụbọchị 1-2. Ọ bụrụ na enweghị bọọlụ nchara ị chọrọ, anyị ga-ebuba ya n'ime ụbọchị 5-7.
Anyị bụ ndị nrụpụta, nwee ikike ibupụ, nwere ike ịnye gị ọnụahịa dị ọnụ ala na mma kacha mma, anyị nwere ike ịnabata ego nke ọtụtụ mba.
Nke gara aga: Bọọlụ Aluminom
Osote: Bọọlụ ọla kọpa
6.35mm 1/4 Brass Ball G200
9.525mm 3/8 Brass Ball G200
Ball siri ike
AdreesịAnglọ Chuangye, Dongchang Eastern Road, Liaocheng City, Shandong Province, China
Oge ọrụMọnde-Fraịde: 9am ruo 6pm Saturday, Sunday: Emechiela
Obere ọla kọpa, Brass Ball Lelee Valve, Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba, Anọ ahịrị Cylindrical ala agba, Cylindrical ala agba 25x52x15, Cylindrical ala agba 20x47x14,